Runtastic Yemoyo Rate PRO, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Zvekare zvakare, vakomana paRuntastic vari zvakare kupa vese vashandisi ve iPhone chishandiso chinowanikwa kurodha mahara. Ino nguva isu tinotaura nezve Runtastic Moyo Rate PRO, chishandiso chinova yedu yemoyo yekutarisa. Kunyangwe kwenguva yakati rebei kuve chikamu, vazhinji ndivo vanoda zvemitambo vakawana quantifier kana zvakananga smartwatch iyo inotibvumidza isu kuziva kurova kwemoyo wedu nguva dzose, havasi vese vane imwe uye vachiri kuda kuenda kunorovedza nefoni yavo vachiteerera mimhanzi yavo yavanofarira uye kuteedzera nzira yavanoteedzera nguva dzese.
1 Runtastic Yemoyo Rate PRO Main Zvimiro
2 Runtastic Heart Rate PRO inoshanda sei
Runtastic Yemoyo Rate PRO Main Zvimiro
Tinogona kuita zviyero zvisina muganho zvekupuruzira kwedu, chero nguva, nzvimbo uye kazhinji sezvatinoda.
Mhedzisiro yekusefa zviyero zvichienderana nekuti vakatorwa vachizorora here, pamberi kana mushure mekudzidziswa, zvinoenderana nehupamhi hwekurova.
Runtastic Inzwa Rate PRO inotipa girafu patinogona kuona kushanduka kweiyo pulse curve uye tichiienzanisa neye pulsations pazororo.
Kutenda kune chiyeuchidzo basa, iko kushandisa kunozotiyeuchidza isu kuti isu tinofanirwa kutora edu mabhatani nguva dzose.
Kuve iyo PRO vhezheni, haina chero mhando yekushambadzira kana mukati-app kutenga.
Runtastic Heart Rate PRO inoshanda sei
Iko kushanda kweichi chishandiso kuri nyore kwazvo, sezvo isu tichifanira chete nzvimbo uye zvinyoronyoro bata munwe wako unonongedza kumashure kwekamera lens uye kupenya. Haufanire kumanikidza zvakanyanya kuti usachinje kutenderera kweropa sezvo mhedzisiro yacho ingangokanganiswa. Ichi chishandiso chinoenderanawo neiyo iPad, asi sezvo iine mwenje, kana tichiita kuyerwa isu tinofanirwa kuzviita munzvimbo inovhenekerwa zvakakwana.
Runtastic Yemoyo Rate PRO ine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda zvachose mahara kuburikidza neiyi inotevera link. Iyo app ine avhareji chiyero che4,5 nyeredzi kubva pa5, sezvinoita mazhinji eaya maanogadzira maapp.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Runtastic Moyo Rate PRO, yemahara kwenguva shoma